Qorshaha Suuqa Ee Zinedine Zidane & Waxa Uu Ka Damcay Ciyaartoyda Badan Ee Uu Hadda Haysto Oo Faah Faahin Laga Bixiyay. | Laacib.net
Qorshaha Suuqa Ee Zinedine Zidane & Waxa Uu Ka Damcay Ciyaartoyda Badan Ee Uu Hadda Haysto Oo Faah Faahin Laga Bixiyay.
May 15, 2019 Mohamoud Batalaale 0
Wax badan ayaa laga qoray ciyaartoyda ay Real Madrid suuqa kala iibsiga ka doonayso iyo waliba ciyaartoyda ay ka diri doonaan Santiago Beranbeu.
Laakiin wargayska Marca ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay waxa uu Zidane ka damacsan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo waliba sida uu u kala shaan dhaynayo ciyaartoyda uu Bernabeu ku haysto.
Liiska Ciyaartoyda uu Zidane doonayo in uu sii haysto ayaa ah kuwo uu hore u aaminsanaa wax qabadkooda markii hore aanu Madrid shaqadeeda iska casilin kuwaas oo uu markale ku sii hayn doono Los Blancos.
Ugu horayn waxay uu haddaba Zidane go’aan ka gaadhay goolhayayaasha kooxdiisa wuxuuna ku shaqayn doonaa Thibaut Courtois oo goolhayaha kowaad noqon doona halka, Andriy Lunin iyo Luca Zidane ay booska labaad iyo saddexaad ku jiri doonaan.
Waxay tani la micno tahay in waqtigii Keylor Navas ee Real Madrid uu soo dhamaaday wuxuuna ka mid yahay liiska ciyaartoyda aan ka hadli doono ee Madrid ka baxaya.
Difaacyada uu Zidane ku haysan doono Madrid waxay noqon doonaan Ferland Mendy oo ay Madrid doonayso in ay la soo wareegto oo lagu daray Dani Carvajal, Alvaro Odriozola, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Marcelo iyo Eder Militao.
Qorshaha khadka dhexe ee Zidane ayaa ah in uu la soo saxiixdo, Pual Pogba, Donny van de Beek, Miralem Pjanic ama Christian Eriksen oo lagu daray xidigaha uu wali Zidane aaminsan yahay ee Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Fede Valverde iyo Marco Asensio.
Weerarka Madrid waxaa diyaar ku ahaan doona Karim Benzema, Vinicius Junior iyo Rodrygo Goes waxaana la iflayaa in Zidane uu heli doono saxiixa Eden Hazard iyo Luka Jovic oo uu doonayo in uu safkiisa weerarka ku soo xoojiyo.
Waa Sidee qorshaha Zidane ee ciyaartoyda aanu doonayn in uu sii haysto?
Goolhaye Keylor Nacas, Gareth Bale iyo Jesus Vallejo ayaa dhamaantood haddaba lagu war galiyay in ayna qorshaha Zidane ku jirin oo ay dheeraad ka yihiin isla markaana ay bixi karaan.
Theo Hernandez ayaan laga soo celin doonin amaahdii uu ku maqnaa halka Sergio Reguilon uu isna amaah kaga bixi karo Bernabeu si uu horumar u sii sameeyo.
Laakiin waxa kale oo aan qorshaha Zidane ku jirin Dani Ceballos iyo Marcos Llorente halka ay Los Blancos ka sii maqnaan doonaan ciyaartoyda kala ah Mateo Kovacic, James Rodriguez, Martin Odegaard iyo Oscar Rodriguez oo hore amaah ugu maqnaa kooxo kale duwan.
Waxaa Madrid ku soo laaban doona Raul de Tomas iyo Borja Mayoral oo amaah ku maqnaa iyada oo markale go’aan laga gaadhi doono laakiin Isco ayaa loo ogolaan karaa in uu baxo halka mustaqbalka Lucas Vazguez aanu wali dhinac u dhicin.
Ugu danbayn Brahmim Diaz iyo Mariano Diaz ayaan la filayn in ay ka mid noqon karaan liiska ciyaartoyda uu Zidane doonayo in uu ku shaqeeyo waxaana go’aan la gaadhi doonaa haddii amaah lagu bixin doono.